Bunka Waxa Uu Yareeyaa Wadne Xanuunka Iyo Macaanka - Daryeel Magazine
Bunka Waxa Uu Yareeyaa Wadne Xanuunka Iyo Macaanka
Daraasad Mareykanka ayaa lagu ogaaday in dadka si joogta ama nidaamsan u cabba bunka ay yartahay in ay u dhintaan sababo badan, oo ay ka kamid tahay cudurada wadnaha iyo macaanka, marka la barbar dhigo kuwa bunka aanan waligood cabbin gabi ahaan.
Mar kaste oo ay cabaan bun dheeraad ah ka qayb-galayaasha daraasaddan waxa yaraatay halista dhimashada , waxa kale oo ay muujiyeen kuwa isticmaala bunka aynan ku jirin maadada caffeine ka xaalad lamid ah tan.
Erika Ovifeld oo cilmi baadhe sare ka ah macadka qaran ee kancarka (National Cancer Institute) ee Rockville ee gobolka Maryland ayaa sheegtay in ay ku jiraan bunka maadooyin firfircooni u leh noola ah,waxana kamid ah potassium, acidka phenolic iyo caffeine.
Waxay ay ku sheegtay fariin ay usoo dirtay wargayska ’’Reuters’’ in daraasado badan oo la sameeyay ay ku soo gunaanadeen isticmaalka bunku in uu si guud xidhiidh ula leeyahay hoose dhigida halista cudurada wadnaha.
Cilmi baadhayaashan ayaa waxa ay isticmaaleen xogta baadhitaano hore oo koobsatay 90 317 oo qof oo aynan taariikhdooda ku jirin in uu haleelay kansarku ama cudurada wadnaha, waxana dabagal lagu hayay xaaladahooda intii u dhaxeysay 1998 ilaa 2009, iyada oo loo dejiyay qaadashada qiyaasta bunka ee maalin kasta ay isticmaalayeen,waxana barbar socday faahfaahino kale oo la xidhiidha caafimaadkooda iyo nidaamkooda cunto.
Sanadkii 2009 ayaa waxa dhintay 8700 qof ,ka dib markii arrimo kale lagu daray xisaabta ,sida isticmaalida sigaarka ,ayaa waxa ay ogaadeen baadhayaalkani in kuwii Cabbayay bunka ay yaraatay in ay haleesho dhimasho intii lagu guda jiray daraasadda markii la barbar dhigay kuwii aanan cabbaynin.
Faaidada Beytaraafku U Leeyahay Dadka Qaba Dhiig-karka Iyo Wadne Xanuunka Waqtiyada Ugu Fiican In Bunka La Cabo Muhiimada Baamiyuhu uu u Leeyahay Hooyada Uurka Leh Iyo Dadka Macaanka Qaba Cunista Shukulaatada Madow Waxay Kaa Difaaci Kartaa Macaanka Iyo Cudurrada Wadnaha